Inona ny angovo azo avy amin'ny herinaratra: toetra sy toby famokarana herinaratra | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 22/07/2021 09:15 | angovo hydraulic
Betsaka ny karazana angovo azo havaozina eto amin'izao tontolo izao ary samy manana ny fandidiana azy ny tsirairay. Ny tanjona dia iray ihany: ny famokarana angovo madio miaraka amin'ny famoahana entona entona aotra zero mampiasa loharanon-tany tsy voafetra. Amin'ity tranga ity dia hiresaka momba ny inona isika herinaratra mandeha amin'ny herinaratra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny atao hoe angovo hydroelectric, inona ny toetrany, ny fomba famokarana azy ary inona ny tombony sy fatiantoka entiny.
1 Inona no atao hoe angovo mandeha amin'ny herinaratra
2 Ampahany amin'ny toby famokarana herinaratra elektrika
3 Karazan-javamaniry herinaratra mandeha amin'ny herinaratra
4 Angovo herinaratra any Espana
Ny angovo Hydroelektrika dia mampiasa ny herin'ny rano amin'ny haavon'ny haavon'ny renirano mba hamadihana azy ho angovo mekanika amin'ny faran'ny ambany indrindra amin'ny faran'ny renirano ary amin'ny farany lasa angovo elektrika. Mamadika ny herin'ny rano ho herinaratra. Mba hampiasana an'io angovo io dia atsangana fotodrafitrasa iray fitehirizana rano lehibe hanamafisana ny mety an'ity loharanom-bola eto an-toerana, azo havaozina ary tsy misy emission ity.
Ny zavamaniry hydroelectric dia andiana fitaovana sy fitaovana elektromekanika ilaina hamadika ny angovo azo avy amin'ny herinaratra ho lasa angovo elektrika ary afaka miasa 24 ora isan'andro. Ny angovo azo avy amin'ny herinaratra dia mifanaraka amin'ny halavan'ny rano mikoriana sy ny riandrano.
Ny toby famokarana herinaratra mahery vaika indrindra eto an-tany dia ilay antsoina hoe "reservoir central". Amin'ireny karazan-javamaniry ireny, miangona ao anaty tohodrano ny rano ary avy eo latsaka avy eo amin'ny haavo ambonin'ilay turbine, izay mahatonga ny turbine hihodina sy hiteraka herinaratra amin'ny alàlan'ny generator misy ao amin'ny nacelle. Avy eo atsangana hampiakatra ny angovo mba hamindrana angovo tsy misy fatiantoka lehibe ary avy eo ampidirina ao amin'ny grid. Etsy ankilany, ny rano efa niasa dia miverina amin'ny fizotrany natoraly.
Fomba iray hafa ny "fifanakalozana mandalo." Ireo karazan-javamaniry herinaratra ireo dia manararaotra ny tsy fitovian'ny renirano voajanahary, ary avy eo mamindra ny rano amin'ny alàlan'ny fantsona mankany amin'ny toby famokarana herinaratra, izay ahafahan'ny turbine mihetsika mitsangana (raha misy hantsana mideza ny renirano) na mitsivalana (raha ambany ny teho ) mitovy amin'ny an'ny zavamaniry fitahirizana ala amin'ny famokarana herinaratra. Ireo karazana ozinina ireo dia miasa tsy tapaka satria tsy manana tahiry fitahirizana rano.
Ampahany amin'ny toby famokarana herinaratra elektrika
Ireto misy ampahany ireto ny zavamaniry hydroelectric:
Tohodrano: Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny fanakanana ny renirano sy ny fikajiana rano (ohatra ny fitoeran-drano) alohan'ny fitehirizana, mamorona fahasamihafana amin'ny rano ampiasaina amin'ny famokarana angovo. Ny rameva dia azo atao amin'ny fotaka na beton (ny be mpampiasa indrindra).
Spillways: Izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny rano nijanona ampahany nandalo ny efitry ny motera ary azo ampiasaina amin'ny filan'ny rano. Eo amin'ny rindrin'ny tohodrano no misy azy ireo ary mety ho ny ambany na ny etona. Ny ankamaroan'ny rano dia very ao amin'ny tavy eo am-pototry ny tohodrano mba hisorohana ny fahasimbana rehefa milatsaka ny rano.
Fisotroana rano: Tompon'andraikitra amin'ny fanangonana ny rano sakanana izy ireo ary mitondra izany any amin'ny masinina amin'ny alàlan'ny fantsona na fantsona tery. Ny vavahady rano dia manana varavarana handrindrana ny habetsaky ny rano mahatratra ny turbine sy ny sivana hisorohana ny fandehanan'ny zavatra vahiny (hazo, rantsana, sns.).
Orinasa mpamokatra herinaratra: Eto ny masinina (turbine miteraka, turbine hydraulic, shafts ary generator) ary ny singa mifehy sy mifehy. Misy varavarana fidirana sy fivoahana handao ny faritra misy ny masinina tsy misy rano mandritra ny fikojakojana na famafana.
Turbine hydraulic: Tompon'andraikitra amin'ny fampiasana ny herin'ny rano mandalo ao izy ireo mba hiteraka fiodinana amin'ny alàlan'ny axis-ny. Misy karazany telo lehibe: kodiarana Pelton, turbines Francis, ary turbine Kaplan (na propeller).
mpanova- Fitaovana elektrika ampiasaina hampitomboana na hampihenana ny herin'ny fantsona misy ankehitriny raha mihazona herinaratra.
Tsipika fandefasana herinaratra: tariby mamindra ny angovo azo.
Karazan-javamaniry herinaratra mandeha amin'ny herinaratra
Miankina amin'ny karazana fampandrosoana, ny zavamaniry hydroelectric dia azo zaraina ho karazany telo:
Zavamaniry mandeha amin'ny herinaratra mikitroka: manangona rano avy amin'ny renirano ireo zavamaniry mpamokatra herinaratra ireo arakaraka ny toe-piainana iainana sy ny fikorianan'ny turbine. Kely ny tsy fitoviana eo amin'ny faritry ny rano, ary izy ireo no ivon-toerana mitaky fikorianana tsy tapaka.
Zavamaniry mandeha amin'ny herinaratra misy tahiry fitehirizana: Ireo zavamaniry mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny herinaratra ireo dia mampiasa tahirin-drano maromaro "upstream" amin'ny alàlan'ny tohodrano. Na inona na inona fikorianan'ny renirano, dia manasaraka ny habetsaky ny rano amin'ireo turbinina mamokatra herinaratra mandritra ny taona ny fitahirizana. Ity karazana orinasa ity dia afaka mampiasa angovo betsaka ary kWh matetika dia mora kokoa.
Toeram-pamokarana Hydroelectric: Ireto zavamaniry mpamokatra herinaratra ireto dia manana tahiry roa misy haavon'ny rano isan-karazany, izay ampiasaina raha ilaina angovo fanampiny. Ny rano avy amin'ny tanky ambony dia mamakivaky ny turbine hahatratra ny tanky ambany ary avy eo miverina amin'ny tanky ambony amin'ny paompy mandritra ny andro rehefa ambany ny filan'ny angovo.
Angovo herinaratra any Espana
Ny fandrosoana ara-teknolojia dia niteraka loharanom-pahalalana angovo microhydraulika izay manana vidiny mifaninana amin'ny tsenan'ny herinaratra, na dia miovaova aza ny vidiny arakaraka ny karazan-javamaniry sy ny hetsika hotanterahina. Raha latsaky ny 10 MW ny herin'ny herinaratra napetraka ary mety mijanona rano na rano mikoriana, dia heverina ho orinasa mpamokatra herinaratra elektrika kely ilay toby famokarana herinaratra.
Androany, ny fampandrosoana ny sehatry ny famokarana herinaratra Espaniola dia mikendry ny hitombo fahombiazana mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fotodrafitrasa misy. Ireo tolo-kevitra ireo dia natao hanamboarana, hanavaozana, hanatsarana na hanitarana ozinina napetraka. Ny microturbines Hydraulika dia novolavolaina tamin'ny herin'ny 10 kW, tena ilaina izy ireo hanararaotana ny hery kinetika ao anaty renirano ary hiteraka herinaratra amin'ny faritra mitokana. Ny turbine dia mamokatra herinaratra mivantana amin'ny fifandimbiasana ankehitriny ary tsy mila rano latsaka, fotodrafitrasa fanampiny na vidin'ny fikolokoloana avo.
Espaniôla izao dia manana zavamaniry hydroelectric 800 misy habe samihafa. Misy foibe mpamokatra herinaratra 20 miaraka amin'ny 200 megawatt mahery, izay miara-maneho ny 50% amin'ny famokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra. Amin'ny farany, Manana tohodrano kely am-polony i Espana izay manana heriny latsaky ny 20 megawatt.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny angovo hydroelectric sy ny fomba fiasan'izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » angovo hydraulic » Inona no atao hoe angovo mandeha amin'ny herinaratra